जागिर अरू नै ठाउँमा, तलब भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट माग! – Health Post Nepal
जागिर अरू नै ठाउँमा, तलब भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट माग!
२०७७ पुष १० गते १७:०७
‘कहीँ नभएको जात्रा हाडिगाउँंमा’ को चरितार्थ भक्तपुरको एउटा अस्पतालमा देखिएको छ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वसिनियर कन्सलटेन्ट डा. प्रकाशराज न्यौपाने अस्पतालबाट बिदा भई अन्य अस्पतालमा कार्यरत छन्। तर, उनले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत रहेको भनेर एक वर्षको तलब मागेका छन्।
न्यौपाने अस्पताल व्यवस्थापन समितिसँग असन्तुष्ट भएर बिदा भएका थिए। तर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकारले लिएपछि उनी तलब माग्न आइपुगेका हुन्।
क्यान्सर अस्पतालका प्रशासक राजाराम तजले अस्पताल छाडेर गइसकेका चिकित्सकलाई तलब दिन नसकिने बताउँछन्। ‘हामीलाई समस्या परेका बेला अस्पतालमा काम नगर्ने अनि अहिले अस्पताल सरकार मातहत आएपछि तलबका लागि पत्र बुझाएको पाइएको छ,’ तजलेले भने।
काम नगरेको हाजिरसमेत नभएका चिकित्सकलाई अस्पतालले तलब दिन नसक्ने उनले उल्लेख गरे। न्यौपानेको मागअनुसार अस्पतालले करीब २० लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डेढ वर्षको तलब रहेको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
कर्मचारी कल्याणकारी संघका अध्यक्ष शिवराम धुख्वाले त न्यौपानेको कार्यकालमा अस्पतालमा हिनामिना भएको दाबी गर्छन्। न्यौपाने हाल आएर क्यान्सर अस्पतालमा हाजिर गर्न खोजिरहे पनि प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्व डारेक्टर तथा क्यान्सर सर्जन डाक्टर प्रकाशराज न्यौपानेले तत्कालिन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले २०७४ कार्तिक २५ गते हाजिर गर्न नदिएपछि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका अध्यक्षले संस्थाको केन्द्रिय कार्यलयमा काजमा बोलाएको बताउँछन्।
त्यसपछि उनले केन्द्रिय कार्यलयमा काम गर्दै आएको न्यौपानेको दावी छ। उनले भने, केन्द्रिय कार्यलयमा काम गरेपछि तलब राखिदिएको थिएन। तलब नराखेपछि उनले पटकपटक यसबारेमा अध्यक्षसंग कुरा राखेको उनले सुनाए।
उनले क्यान्सर सर्जन भएर काम गरिराखेका थिए। उनले भने, केन्द्रिय कार्यालयको साथसाथै अस्पतालले बोलाउने बेलामा पनि कामगर्दै आएको छु।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको थियो। यसलाई मध्येनजर गरेर उनले एकदुई महिनामा मुद्दा सकिन्छ त्यसपछि तलबको विषयमा कुरा गरौंला भनेर सोचेको थिए, उनले भने। तर मुद्दा करिव डेढ वर्षपछि सकेर सरकारले लिएपछि तत्कालिन अस्पतालका अध्यक्षले काज फिर्ता गरी अस्पतालमा काम गर्न पठाएको उनी बताउँछन्।
काज फर्ता गरेपनि आफूसंग भएका पत्रहरु लिई अस्पतालमा हाजिर हुन पाउ भनी पत्र दिएको उनले स्वीकार गरे। कार्यकारी निर्देशकले मौखक रुपमा यस विषयलाई विकास समितिमा राखी निर्णय पश्चात मात्र हाजिर गराउने भनिएको छ, उनले भने। साथै उनले अस्पतालमा हाजिर गर्न दिएपनि पुन क्यान्सर अस्पतालका विरामीको उपचारमा गर्ने बताए।
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका निमित्त अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले सेवा अवधि नै नपुगेका अस्पतालका तीनजना डाक्टरलाई बढुवा गरिएको पत्र आएको बताए। श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको अस्पताल अहिले सरकारले लिएपछि नयाँं समिति बनिसकेको छ।
कात्तिक २४ पछि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले गठन गरेको र भक्तपुर नगरपालिकाले गठन गरेको दुवै व्यवस्थापन समितिको अस्तित्व समाप्त भएको मानिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंसिर तेस्रो हप्ता प्राडा विष्णुदत्त पौडेललाई निर्देशकको नियुक्ति दिएर पठाइसकेको छ।
कात्तिक २४ उपरान्त पुराना व्यवस्थापन समितिको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्था र अस्पताल प्रशासन र कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसबिना बढुवा हुनै नसक्ने नियमलाई अनदेखा गरी बढुवाको पत्र ठमाउनुमा पनि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ।